Ikhabhathi entle kwi-BISON Ranch~Igumbi lokulala eli-1+Iindawo zokuhlala ezi-2!
Yiza kwindawo apho inyathi izulazula khona! Relax kwikhabhathi yethu entle eyenziwe ngesandla enegumbi elinye eligcweleyo kunye namagumbi amabini aphezulu. Thatha uhambo lwe-1.6 yeemayile ukujonga iMammal yeSizwe yaseMelika. Iimayile ezi-3 ukusuka kwi-I-80. Hlala uqhagamshelene ne-wifi yethu ethembekileyo okanye ukhuphe iplagi ukonwabela izandi zendalo ukusuka kwindawo ejikeleze idesika kunye nendawo yomlilo. Yiza nokutya kwakho kwi-grill okanye uthenge iibhega zenyathi kwivenkile yethu yokuthengisa. Kufuphi kwindawo yokutyela kunye nokuzonwabisa! Ukutshona kwelanga okumangalisayo kwi-Sunset Hills Bison Ranch!
Ikhabhinethi ikwindawo yeehektare ezi-5 enamahashe, iinyathi kunye nezinye izilwanyana ezincinci kunye neentaka. Sijikelezwe ngumhlaba ovulekileyo obanzi! Iindwendwe zinokufikelela kwindawo enkulu yangaphandle kunye neendlela zokuhamba. Umkhondo wexesha lonyaka we-1.6 yeemayile wokuhamba ujikeleza indawo ebiyelweyo yeenyathi useluxolweni kodwa usenokungafumaneki ngenxa yokuguquguquka komhlambi weenyathi. Ukhuseleko yeyona nkxalabo yethu iphambili.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, umatrasi ompontshwayo oyi- 1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-3, isofa ekwayibhedi eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
I-TV ene-I-Netflix, I-Roku, I-Fire TV, I-Amazon Prime Video
Sifumaneka kwiikhilomitha ezi-3 ukusuka kwi-I-80 ephakathi kwe-Des Moines kunye ne-Iowa City. Singaphantsi kweekhilomitha ezi-2 ukusuka kwibha encinci kunye ne-grill kunye neekhilomitha ezi-5 ukuya kwiivenkile zokutya kunye nezikhululo zegesi. Ngaphezulu kancinane kweemayile ezili-10 kuya kukubeka eGrinnell, e-Iowa ngamatyathanga egrosari amakhulu, eWalmart kunye neendawo zokutyela ezingaphezu kwama-30.
Ababuki zindwendwe bahlala kwisiza esikwifama eselumelwaneni. Sifumaneka ngokufowuna/ngokubhaliweyo okanye nge pop on over. Sithanda ukunika iindwendwe indawo eninzi kangangoko sinakho, kodwa sihlala sonwabile ukwabelana ngolwazi lwethu lwenyathi kwaye sinikeze ukhenketho olunzulu lwefama yethu.
Ababuki zindwendwe bahlala kwisiza esikwifama eselumelwaneni. Sifumaneka ngokufowuna/ngokubhaliweyo okanye nge pop on over. Sithanda ukunika iindwendwe indawo eninzi kangangoko sin…